Bingo ကစားရန်နည်းလမ်းကောင်း (၃)ခု - Myanmar Online Game
Slot Games စလော့ဂိမ်းများ
Fish Games ငါးပစ်ဂိမ်း
About Casino ကာစီနိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်အကြောင်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ…..မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကာစီနိုဂိမ်းများထဲမှ ကဒ်နဲ့ကစားရသည့် ဂိမ်းမည်မျှလောက် သိပါသလဲ? ၄င်းထဲမှ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘယ်နှခုကစားလေ့ရှိလဲ? ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မိတ်ဆွေအတွက် Card Game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bingo ဂိမ်းအကြောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်။
(၁) ဂိမ်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်အတွင်း ကဒ်များကို ရနိုင်သလောက်ဝယ်ယူပါ
Bingo ဂိမ်းရဲ့ကစားကောင်းနည်းလမ်းများထဲမှာ မိမိကိုယ်မိမိ အထာကျကျ ကစားတတ်ခြင်း ကလည်း အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကစားပွဲကပေးတဲ့ ဘင်ဂိုကဒ်အတော်များများကို ဝယ်ယူလိုမှာပေါ့နော်။ ဤနေရာမှာ မိတ်ဆွေသိသင့်တဲ့အချက်ကတော့ ဘင်ဂိုကစားခန်းမ(သို့)ကစားဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ရှိကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းတိတိကျကျသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၂) မတူညီတဲ့ ဘင်ဂိုကစားနေရာများတွင် ကစားပေးပါ
နောက်ထပ်အကျိုးရှိစေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ နိုင်ခြေအလေးသာမှုက မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မတူညီတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ စုံလင်စွာ ဆော့ကစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ မိမိအနေနဲ့ တစ်နေရာထဲမှာပဲကစားမည်ဆိုပါလျှင် အခြားဝိုင်းများမှ မိမိကိုအနိုင်ရရှိစေမယ့် အခွင့်အရေးနဲ့ လွှဲချော်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စကားပုံလည်းရှိဖူးတယ်မဟုတ်လား ” တစ်ရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ် ” ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ထို့ပြင် မိမိအနေနှင့်လည်း မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွင် ဘင်ဂိုဂိမ်း ကစားခွင့်ရှိမရှိ ဆိုတာလဲ စုံစမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ထိုမှသာ မိမိအနေနဲ့ မိမိအကြိုက်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး ကောင်းကောင်းကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ
သင့်ကို ဘင်းဂိုး ဂိမ်းမှာ အမြန်အပြီးသတ်နိုင်စေသည့် သတိထားရမည့်အချက်တစ်ချက်မှာ ရူးကြောင်ကြောင်လုပ်ကွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ? ဘင်းဂိုးဂိမ်းသည် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ စိမ်ပြေနပြေ ကစားရတဲ့ဂိမ်းလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်းပြီးဆုံးသွားဖို့က သိပ်ကိုလျှင်မြန်တယ် ဆိုတာလဲ သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မိမိအနေနဲ့ ဂိမ်းကဒ်မှဂဏန်းများကို ၁၅ စက္ကန့်မှ ၃၀ စက္ကန့်အတွင်း လျှင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုတတ်ရပါမယ်။
ဤမျှဆိုရင် မိတ်ဆွေအတွက် ဘင်းဂိုးကစားနည်းလေး အတော်လေး လုံလောက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဆိုတော့ နောက်တစ်ခေါက် Bingo ဂိမ်းကစားရင်း ဘင်းဂိုး ဘင်းဂိုး ဆိုပြီး အော်ကစားကြပါစို့နော့်။
February 9, 2020 4:44 am
F*ckin¦ tremendous things here. I¦m very glad to look your post. Thanks so much and i am havingalook ahead to contact you. Will you kindly drop meae-mail?
© 2019 JDBYG